Home विचार / दृष्टिकोण बुद्ध जयन्ति किन महत्वपूर्ण ?
बिष्णु गुरुङ (एकता)
नेपालको राष्ट्रिय विभूति महापुरुष गौतम बुद्धको जन्म आज भन्दा २५५८ बर्ष पहिला कपिलबस्तु, लुम्बिनीमा बैशाख पुर्णिमाको दिनमा भएको थियो। बुद्ध जन्मेको दिनलाई बुद्ध जयन्तिको रुपमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ बिशेष गरेर बौद्ध धर्मालम्बिहरुले विश्वभर मनाउँदछन। अहिले नेपालीहरुले पनि यस दिनलाई विश्वब्यापी रुपमा मनाउँन जमर्को गरेको दिखिन्छ। बुद्ध जयन्ति भन्ने बित्तिकै हरेक मानिसको मनमा शान्ति साथै बुद्धप्रति श्रद्धाको भावना पैदा अवश्य हुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा बुद्ध जयन्तिलाई नेपालको राष्ट्रीय पर्वको रुपमा स्थापित गरेर बुद्धको शान्ति, अहिंसा, प्रेम र दयाको संदेश संसारलाई दिदै हामी नेपालीहरुले विश्वब्यापी रुपमा यसलाई मनाएर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँन सकिन्छ। साथै नेपाललाई बुद्धको जन्मभूमि तथा कला, संस्कतिको धनि देश भनेर विश्वमा स्थापित गर्न ठुलो माध्यम बन्दछ बुद्ध जयन्ति। यस पबित्र दिनको अबशर परेर नेपालले विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्न सफल हुन् सक्नु पर्दछ।
हामीले छिमेकी देश भारतबाट सिकौ, भारतले ताज महललाई विश्वमा स्थापित गरेर ताज महल मात्र हेर्न बर्षेनी ४० लाख पर्यटन भारतमा भित्रिन्छन। भने नेपालले पनि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई ताज महल जस्तै विश्वमा स्थापित गर्न सक्यो भने नेपालमा बुद्धको जन्मभूमिका सुन्दर बुद्ध मन्दिरहरु हेर्न साथै बौद्ध धर्मलाम्बिहरु तिर्थ गर्न अनि नेपालको गहन कला, संस्कृति हेर्न बर्षेनी पचाशौ लाख पर्यटन नेपाल भित्रिन्छन। अनि नेपालको लाखौ युवाबर्ग सानो रोजगारीको लागि खाडी मुलुकहरुमा तनावपूर्ण जीवन बिताउँन बाध्य हुनु पर्नेछैन। बर्षेनी नेपाल आमाले कयौ युवा सन्तान बिदेशी धर्तीमा गुमाउँनु पर्ने छैन। हजारौ चेलिबेटीहरु भारतको बेश्यालयमा नर्क सरि जिन्दगि बिताई रहेको पिडा हामीले सहनु पर्ने छैन। भारतले नक्कली कपिलबस्तुलाई बुद्धको जन्मभूमि भनेर कसैलाई झुक्याउँन सक्ने छैन। हाम्रो पहिचान बुद्धको सन्तान, धनि देश नेपाल शान्तिप्रेमी नेपाली भनेर विश्वमा स्थापित हेनेछ।
शान्तिका अग्रदुत अहिंसाका प्रतिक भगवान गौतम बुद्धले मानव मुक्तिको लागि दिनु भएको मार्गदर्शन शान्ति, अहिंसा, दया र प्रेम हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्न किन आवश्यक छ त ? हो २१ शौ शताब्दीको यस बैज्ञानिक युगमा मानिसले कल्पना नै गर्न नसक्ने विज्ञानको चमत्कार देख्न र भोग्न पाएको अवस्था छ। जसले मानिसको पार्थिक शरीरलाई धेरै सुखसयल दिएको छ। संसारभरको मानवलाई एउटै ठाउँमा भेटाई दिएका छन्। सोच, बिचारलाई विश्वभर फैलाउन सक्ने एक अर्कामा बाड्न सक्ने सबै सबै सुबिधाहरु छन्। तर पनि मानिसको जीवन दिन प्रतिदिन प्रतिसपर्दात्मक र तनावपूर्ण बन्दै गईरहेको छ। आखिर जीवनमा जति नै सफल प्राप्त गरे पनि जब सम्म मनमा शान्ति हुदैन तब सम्म जीवन सुखमय हुन नसक्दो रहेछ भन्ने कुराको महसुस अहिलेको बैज्ञानिक युगमा अझ बढी भएको छ।
अहिले बुद्धिजम संसारको धेरै देशहरुमा अभ्यास भैरहेको छ। ठुल्ठुला विश्वबिध्यालयहरुमा यस सम्बन्धि अध्यान भैरहेको छ। विभिन्न भाषाहरुमा ठुल्ठुला ग्रन्थहरु पाईन्छ। अहिलेको बैज्ञानिक चमत्कारमा मानिस आफ्नो सफलता पछि नै दगुर्छन। यस्तो अबस्थामा जब मानिसको हृदयमा दया, प्रेम हुदैन भने मानवता हराएर जानेछ। हिंसा र अशान्ति बढ्यो भने जीवन अनि संसार नष्ट बनाउँनेछ। त्यसैले गौतम बुद्धको शान्ति, अहिंसा, दया र प्रेम को संदेश मानव कल्याणको मध्यम बनेको छ। बुद्धको नाम मात्र सम्झदा पनि हाम्रो मनले उहाँको संदेश आपसेआप अनुभूति गराउदछ भने बुद्ध जयन्ति मनाउँनु भनेको मानव कल्याण गर्नु पनि हो। सारा नेपाली एक जुट भएर बुद्ध जयन्ति मनाऔ। शान्तिको संदेश दिदै नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई विश्वमा स्थापित गरौ।